Askarigii Soomaaliga ee dhawaan dilay askari ka tirsanaa ciidanka Jabuuti oo ku biiray Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Askarigii Soomaaliga ee dhawaan dilay askari ka tirsanaa ciidanka Jabuuti oo ku biiray Al-shabaab
Wararka naga soo gaaraya degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in askari maalintii Arbacada ahayd dilka u geystay askari ka tirsanaa ciidanka Jabuuti ee AMISOM uu haatan ku biiray dagaalyahanadda Al-shabaab.
Askarigaasi oo baxsaday kadib markii uu dilka geystay ayaa haatan warar aan la hubin waxay sheegayaan inuu maalintii shalay gaaray deegaanka Halgan ee duuleedka magaalada B/weyne, isagoona kadib isku dhiibay dagaalyahanadda Al-shabaab.
Hadii ay arrinkaan sax noqoto ayaa waxaa la dhihi karaan in ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Buulo-burte ay ku guul-dareysteen inay gacanta kusoo dhigaan askarigaasi dilka geystay.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo ay wehliyaan saraakiil ka socota ciidamada AMISOM iyo maamulka gobolka Hiiraan oo maalintii shalay gaaray degmada Buulo-burte ayaa bilaabay inay wax badan ka ogaadaan arrinta sida ay u dhacday.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in dilka askariga Jabuutiyaanka ah uu yimid kadib markii askariga Soomaaliga ah ee dilka geystay uu ka carootay, dharbaaxo uu askariga Jabuutiyaanka ahaa ku dhuftay haweeney Soomaali ah oo Khaadka ku iibisa halkaas.
Dhinaca kale, dhacdadaan oo noqoneysa tii ugu horeeysay ee lagu dilo askari ka tirsan ciidanka AMISOM, ayaa la sheegayaa inay xiisad iyo is-aamin darro ka dhex dhalisay ciidamada Jabuuti ee AMISOM iyo kuwa Soomaalida ah ee ku sugan degmada Buuloburte ee gobolka Hiiraan.